Mersin Metro ayaa Magaalada hoos u dhigaya, Bulshada ayaa Kulmaysa | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinMersin Metro ayaa Magaalada u keeni doonta si loo yareeyo Bulshada
26 / 01 / 2020 33 Mersin, Coast Mediterranean, tareenka, GUUD, Khariidadaha, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY, VIDEO
metro of mersin si ay ula kulmaan magaalada si ay u qabsadaan magaalada
Duqa Magaalada Mersin Metropolitan Vahap Seçer wuxuu la kulmay ganacsatada xubnaha ka ah ururka kulankaas oo ay soo qaban qaabiyeen Mersin Warshadaha iyo Ururka Dadka Ganacsiga (MESİAD) Madaxweyne Hasan Engin. Isagoo sharraxaya maal-gashiga ay ku hayaan Mersin, Duqa Seçer wuxuu yiri, “Metro waa mashruuc weyn, waa mashruuc wanaagsan, waxaan aaminsanahay, inaan ka dambeeyo. Waxaan bilaabi doonnaa bixinta tan 6 sano kadib. Waxaan rabaa taageeradaada arintan. Kaliya maahan in hoos loo dhigo rakaabka laakiin lagu soo qaado garoonka. Waxaa jira qiimo muhiim ah oo lagu dari karo magaalada, waa inaan aragnaa tan. ”
Kulankan, Duqa Vahap Seçer iyo Duqa Mediterranean Mustafa Gültak, Prof. Dr. Waxaa kajawaabtay su'aalaha kaqeybgaleyaasha, oo uu duubay Yusuf Zeren. Khudbadiisa ayuu ku bilaabay isaga oo xasuusinaya inuu isagu sidoo kale yahay nin ganacsade ah, Madaxweyne Vahap Seçer wuxuu yidhi, “Waxaan soosaaraynaa hadda. Waxaan isku dayeynaa inaan soo saarno nafteenna laakiin aan u sameeyno magaaladeena, dalkeenna iyo dadnimadeenna. Tani waa farxad gooni ah. Ma jiro lacag la mid ah tan. Tani waa wax kale. Waa inaad tan ku noolaataa. Waxaan ahay duqa aad u wanaagsan oo faraxsan. Waxaa loo tixgelin karaa inay tahay hawl aad u adag. Laakiin waxaan naftayda u isticmaalaa inaan noqdo qof aad u faraxsan maxaa yeelay hurdo raaxo leh ayaan u seexdaa fiidkana waan seexanayaa. Waxaan luminayaa tamarteyda si aan wax ugu daro magaalada haddii aan farxadan horey u jirin. ”
“Aad ayaan ugu qanacsanahay kulankeena”
Isagoo ku nuuxnuuxsaday inay yihiin siyaasiyiin khibrad leh oo og in dagaalka uusan wax faa iido ah u yeelan doonin bulshada iyo dalka, Madaxweyne Seçer wuxuu yiri, “Xilliga cusub waa sawir aad u wanaagsan wixii ka dambeeya 31-ka Maarso. Waad ilaalinaysaa ururka. Intooda badan golaha deegaanka ma joogo xafladda duqa magaalada. Laakiin eray kasta oo wax u dhimaya muwaadiniinteena kana murugoonaya niyaddooda kama bixi karto shirkaas. umana kici karo. Annaga ayaa dammaanad ka qaadnay tan. Taasi waa sababta aan u nidhaahno waxaan qibrad u leenahay. Waxaan leenahay hab-dhaqanno siyaasadeed, hab-nololeed, hab-suuqeed. Waxaan ku soo baxnay kalsooni, isla markaana markii aan sheeganeyno, waxaan ku tiirsannahay taariikhdeena oo aan sheegannaa. Waxaan sameyneynaa mashruucan, go'aankaan waan gaarnaa, waan u adkeysannaa cawaaqibka siyaasadeed. Kuwaani waxaa sabab u ah isku kalsoonida ay bixiso mudnaanta gadaal. Aad ayaan ugu qanacsanahay kulankeena. Waxaan taageero ka helaa mowduuc walba oo magaalada wax u tara. Tan waxaan u sheegayaa si furan. Sikastaba, waxaan ku adkeystaa waxkasta oo aan faa iido uheyn magaalada. Qaybta shirka iga soo horjeedda igama qubtaan biyo yar-yar oo waqti yar ka waqti. Waxaa jira go'aamo aad u weyn oo la xiriira arrimaha aad muhiimka u ah, nasiibdarro mararka qaarkood siyaabo aad u fudud ayey siyaasad ahaan ugu dhaawacmaan. "Go'aannadani saamayn kuma yeelan doonaan natiijada ka soo socota Eebe waxayna ku yeelan doonaan magaalada qaab xun."
Waxaan gacanta ku haynaa howlaheena si ay xafiisyadu u dhaqmaan.
Isagoo sharraxaya inay isku dayayaan inay dardar geliyaan nidaamka shaqo ee ku saabsan qorshaha sayga ah ee 1/5000 ee ganacsiga adduunka ee Mersin uu muddo dheer sugayay, Duqa Seçer wuxuu yiri, “Saaxiibbadeenna qiimaha badan, ee xubnaha ka ah dowladda, badhasaabyadeena, ku xigeennadeenna, Mr. Wasiirka, muddadi hore ee wasiir iyo saaxiibkay ka socda Guddiga Miisaaniyadda Qorsheynta. Ku-biirinta Mudane Elvan, waxaan isku dayeynaa inaan ka gudubno xannibaadaha ka jira xafiisyada-sharciga. Sida ugu dhakhsaha badan ee suurta galka ah, waxaan gacanta ku heynaa shaqada. ”
“Madaarka Çukurova xitaa mahan abaalmarin kusaabsan gegada diyaaradaha ee Istanbul, laakiin waa mid anaga noo muhiim ah”
Duqa magaalada Seçer wuxuu cadeeyay in mowduuca madaarka Çukurova uu yahay mowqifka maamulka dhexe uuna ku raacaayo inuu yahay Duqa Magaalada. Maalgashi aad u aan loo baahnayn oo dheer. Runtii waa wax qarsoon. Awooddan ayaa ka dhigtay Madaarka Istanbul. Waa inuu sida ugu dhaqsaha badan u sameeyaa tan. Xitaa abaalmarin kuma soo socota. Waa mashruuc yar. Laakiin waa mashruuc noo yeelan doona natiijooyin muhiim ah annaguna ku biirin doona qayb muhiim ah qayb walba. "
"Waxaan maalgashi ku sameyn doonaa kaabayaasha 2.5 bilyan lira ee gobollada dalxiiska"
Isagoo ogaysiinaya inay Mersin tahay inay sameyso mashaariic dalxiis, Duqa Seçer wuxuu yiri, “Waxaan muhiimad gaar ah u leenahay kaabayaasha gobolada dalxiiska 4ta sano ee soo socota, waxaan yeelan doonnaa maalgashiyo muhiim ah sida kaabayaasha dhaqaalaha, biyo nadiif ah oo la cabbo, bullaacad, tas-hiilaadka daaweynta biyaha wasakhda ah ee gobollada galbeedka Mersin, halkaas oo dalxiisku uu aad ugu badan yahay. Waxaa jira kharash maalgashi qiyaastii 2.5 bilyan oo deyn ah oo aan ku isticmaali doono gobolkan. Waxaan ka faa'iideysan karnaa deeqaha. Waxaa jira habab kala duwan oo tan loo sameeyo, waa inaad raadisaa oo aad raacdaa mashruuca. Shabakada biyaha biyaha ee Mezitli, waxaan ka heli doonnaa deeq 17m-Euro ah Hay'ada Horumarinta Faransiiska. Deeqaha waxaa lagu sameeyaa tixraacyo kaladuwan. Inbadan oo tixraac ah ayaa leh Mersin. Martida Siiriya bilowga. Deeqaha muhiimka ah waxaa laga heli karaa ururada caalamiga ah, wakaaladaha, bangiyada iyo wadamada iyadoo la tixraacayo qaxootiga Siiriya, waxaa loo isticmaali karaa kaabayaasha. Waxaan ku qabannaa shaqooyin muhiim ah kuwan. Dabcan, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa mashaariicda bulshada. ”
"Waxaan u baahan nahay inaan soo saarno mashruucyo taageero deeq ah"
Isagoo tilmaamay inay degmooyinka leeyihiin laba ilo muhiim ah, Duqa magaalada Seçer wuxuu usii waday sidan: “Waxaa jira laba ilo oo muhiim ah anaga. Waxaan ubaahanahay inaan isticmaalno anagoo badin karna. Midkood waa ilaha aadanaha. Waxaa jira 2 kun oo shaqaale ah, laakiin dhibaatooyin badan ayaa na haysta. Macaamilku waa muhiim. Si aad u hesho natiijooyin wanaagsan, waa inaad sida ugu fiican ula shaqeysaa. Midda kalena waa maalgelin. Maalgelin la'aan, ma garan kartid saadaasha ay abuurtay ilaha aadanaha. Daqligeygu waa 10 milyan iyo 90 milyan ginni. Wax intaas ka badan ma jiraan. Tan ayaad ku sameyn kartaa kharashyada hadda ee magaaladan. Waad ku guuleysan kartaa mashaariic yar yar. Intooda badani waa mashruucyo bulsheed. Laakiin fursad uma lihid inaad ku saxiixdid hoosaadyo joogto ah, mashaariic waaweyn, oo waaweyn. Tani waa dhab, waa inaad tan aragtaa. Taasi waa sababta aan u baahan nahay inaan abuurno ilo dhaqaale. Waxaan u baahanahay inaan tan ka keenno dibedda. Waxaan u baahanahay inaan abuurno qiimo jaban, waqti dheer, ilo dhaqaale oo la awoodi karo. Waxaan u baahanahay inaan abuurno cutub mashruuc oo ku saabsan deeqaha oo aan u gudbinno deeqahaas gobolkeena. ”
Sheeg mashruuca tareenka dhulka hoostiisa mara
Duqa Magaalada Mersin ee Magaalada Vahap Seçer ayaa sidoo kale qiimeyn ku sameeyay mashruuca nidaamka tareenka inta uu socday kulankiisa ganacsatada. Duqa Seçer wuxuu yiri: “Metro waa mashruuc weyn, waa mashruuc wanaagsan, waxaan aaminsanahay, inan ka dambeeyo. Waa inaan marka hore rumaysto. Ganacsi ma samaynayo. Ma aanan sameynin maxaa yeelay qof ayaa sidaas yiri. Qof ayaa dhahay wadada tareenka ka hor doorashada, waxaanna ballan qaadnay inaanaan sameyn doonin. Haddii ay khalad ahayd, khaladka waan ka soo noqon lahaa, bulshada ayaan u sharixi lahaa. Waxaan bilaabi doonnaa bixinta tan 6 sano kadib. Waxaan garaacnay pickaxe, 6 sano kadib saacaddu waxay shaqeyn doontaa, lacag bixinta ayaa bilaaban doonta. 3.5 sano oo dhismo ah, 6 bilood oo ikhtiyaar ah, 4 sano oo waqti dhismo ah, 2 sano oo nimco ah, intaas kadib waxaan bilaabaynaa 11 sano. Wadar ahaan 17 sano. Waxaan bilownay maanta, waxaan bixin doonaa 17 sano, laakiin waxaan bilaabi doonaa 6 sano. Waxaan rabaa taageeradaada arintan. Kaliya maahan in hoos loo dhigo rakaabka laakiin lagu soo qaado garoonka. Waxaa jira qiimo muhiim ah oo lagu daro magaalada. Waxay kicineysaa bulshada. Waxaan xaqiijin doonnaa mashruuc noocan oo kale ah in qof kasta oo dakhligiisu hooseeyo, dakhli sarreeya, daqli dhexe uu qaadan doono dhulka hoostiisa. Maxaa yeelay isagu wuxuu tegi doonaa Badda Dhexe. Wuxuu tagi doonaa Isbitaalka Magaalada, wuxuu tagi doonaa boosteejada basaska wuuna aadi doonaa Mezitli. Kuwa aada gogoldhigga waa la helayaa, kuwa aada Marina waa ku sii jiri doonaan, kuwa jaamacad aadaana waa ku sii jiri doonaan. Waa mashruuc bulshada u keenaya iskuxirkiisa oo dhan. Waxay ka dhigeysaa magaalada mid sii yaraaneysa. Magaalada ayaa sii yaraaneysa. Sababta oo ah hadda waxay gaadhay meeshii aanu gaadhi karin 40 daqiiqo 10 daqiiqo gudahood, 15 daqiiqo. Halkaan wax ka iibsashada ayaa noloshu ku timid. Dadku meelkasta iskama xirna. Gawaarida badan ayaan wadooyinka ka bixin, qulqulo aad u badan majiraan, shidaal aad u badan lama cuno, dhawaq aad u badan ma jiro. Sheeg, waa mashruuc muhiim ah. Wixii aad maanta ugu yeedhay qaali waxay noqon doontaa berri.
Maraakiibta Tasucu ee komishanka laxiriirta
Isaga oo garawsaday in arrinta laxiriirta Ta Sucu Shipyard haatan lagu baarayo gudiyada ay khusayso ee golaha magaalada, Duqa Seçer wuxuu cadeeyay inuu doorbidayo go aanka kadib marki arinka si buuxda loo fahmay isagoon ku degdegin arinka.
Madaxweyne Seçer wuxuu kaloo xasuusiyay inay ra'yi qaldan ka dhiibteen xarunta polypropylene ee loogu talagalay in laga dhiso degmada Karaduvar.
Isagoo cadeeyay inay diyaariyeen qorshe wax looga badali karo aaggooda si loo baabi'iyo ciriiriga ka jira iridda Port A isla markaana ay xiriir toos ah ka helaan dekeda iyo baska, Madaxweynaha Seçer wuxuu ku nuuxnuuxsaday in dadaallada arrintan la xiriira ay ka mid yihiin TCDD.
Madaxweyne Seçer wuxuu xusey in dadaallada lagu ciribtirayo qaladaadkii ka dhex dhacay musiibada daadadka ee usbuucyadii la soo dhaafay ay bilaabeen ka hor xilliga qaboobaha ee soo socda.
Bulshada Newkapı oo ka socota Marmaray Gaadiidka ayaa la baaray
BALO waxa ay wadajir u soo saari doontaa Anadolu iyo Yurub wadada tareenka
Topbas: Cusub Cusub wuxuu Istanbul keeni doonaa badda
Ankara-Sivas Line-tareenka xawaaraha sare leh ayaa la kulmi doona Ankara iyo Kirikkale
3. garoonka diyaaradaha si uu ula kulmo shixnadaha caalamka
Khadka tareenku wuxuu wadajir u keeni doonaa Golden Horn iyo Black Sea
Samsun gudoomiye ayaa xubno ka mid ah saxaafadda la wadaagaya tareenka xawaaraha sare
Mashaariicda dalxiiska ee Mersin
Goorta la Sameeyo Mersin Metro